Fanjingshan Dabaqa Vinyl Dabaqyada Bakteeriyada Dabiiciga ah
Dabaqa ESD Vinyl Dhulka
Dabaqa Vinyl ee kaladuwan
Jaranjarada Guud ee Jaranjarada
Sidee loo xaliyaa dhibaatada xoqida ee dabaqa caaga ah ee PVC?
Dabaqa balaastigga ah ee PVC waa nooc cusub oo ah walxaha qurxinta ee dabaqa miisaanka fudud oo caan ku ah adduunka maanta, sidoo kale loo yaqaan "walxaha dabaqa miisaanka fudud". Waxaa si guud looga aqoonsaday magaalooyinka waaweyn iyo kuwa dhex dhexaadka ah ee Shiinaha aadna waa loo isticmaalaa. PVC dabaqa caag ha ...
Taxaddarrada lagu ilaalinayo dhalaalka PVC dabaqa caagga ah
Gogosha caaga ah ee caaga ah ee loo yaqaan 'PVC floor floor' ayaa si weyn loogu isticmaalaa goobaha ganacsiga iyo meelaha la deggan yahay, taas oo sare u qaadaysa heerka muuqaalka iyo muuqaalka dhulka. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad ka dhigto dabaqa laastikada mid dhalaalaya oo qurux badan muddo dheer, waa inaad ku kacdaa waxyaalahan habka isticmaalka. Nadiif ka dhig Ha isticmaalin cleanin ...
Waa kuwee dabaqa PVC ee leh iska caabinta abrasionka ugu fiican?
by admin on 2021-04-16
Marka laga hadlayo iska caabbinta xirashada sagxadda PVC, waxay had iyo jeer ahayd mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee macaamiisha ay fiiro gaar ah u yeeshaan. Caabbinta xirashada gogosha PVC waxay si toos ah ula xiriirtaa nafteeda. Gogosha PVC guud ahaan waxaa loo qaybiyaa saddex nooc: hoose is haysta, xumbada hoose iyo isleeg iyo transpar ...
Xirfadaha u dhigma midabka dabaqa PVC ee guryaha lagu xanaaneeyo
by admin on 2021-03-22
Waayeelka waa koox faa iido ku ah bulshada, qurxinta guryahooda waa in loo waafajiyaa astaamaha jireed iyo nafsiyeed ee waayeelka si loo abuuro jawi raaxo leh, xarrago leh, fudud oo ku habboon oo ku habboon shakhsiyadeed. Dabaqa ku habboon f ...
Dhibaatooyinka caadiga ah ee rakibidda dabaqa PVC!
Gogosha PVC waxay noqotay qalab dhisme oo caan ku ah suuqa. Si kastaba ha noqotee, dhismo aan habooneyn inta lagu gudajiro howsha dhigista waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa saameynta guud. Kuwa soo socdaa waa dhowr dhibaatooyin oo caam ah oo kaa caawin doona kordhinta waxtarkaaga gogoshaada PVC. Nolosha adeegga. ...
Gogosha PVC farsamada Standard-European Standard
Heerka Yurub ee sagxadda PVC waxaa loo soo gaabiyay EN. Waxay markii hore ahayd halbeeg imtixaan oo ay saxiixeen 15-ka waddan ee Bulshada Dhaqaalaha Yurub. Heerka imtixaankani wuxuu u qaybsan yahay waxyaabo badan. Kuwaas waxaa ka mid ah, darajada TPMF ee alaabooyinka isku mid ah ee aan inta badan dhahno waxay ka yimaadaan ti ...
Saddexda qodob ee ugu muhiimsan si loo kala saaro tayada sagxadda PVC isku mid ah
Maxay ugu kala duwan yihiin tayada iyo qiimaha dabaqa vinylka isku mid ah? 1.Weight PVC flooring waxaa badanaa laga sameeyaa maadada polyvinyl chloride, waxaa jiri doona qadar yar oo ah budada dhagxaanta (kaalshiyamka kaarboont); waxyaabaha ku jira budada dhagaxu waxay saameyn ku yeelan doonaan culeyska sagxadda PVC, laakiin ...
Sida looga saaro koollada sagxadda caaga ah ee PVC
Sidee looga saaraa xabagta sagxadda sagxadda ee aan horay u bogsan? Rag: Way fiican tahay in la nadiifiyo ka hor inta xabagta aysan qallajin oo aan la adkeyn. Waqtigaan, xabagta ayaa dareere ah. Asal ahaan waa la nadiifiyaa ka dib isticmaalkiisa ama lagu tirtiraa maro, ka dibna tirtir xabagta haray. Khamriga: xabagta dhulka ...
Nidaamka rakibidda ee dabaqa PVC-ka-hortagga ah
1. Nadiifi dhulka oo raadso khadka dhexe: Marka hore, nadiifi caarada dhulka, ka dibna ka hel bartanka qolka agab wax lagu cabiro, sawira xariiqda xariiqda dhexe, oo weydii xariijinta in si siman si siman loogu qaybiyo. 2. Dhigid ...
Maxay tahay sababta dabaqa vinyl isku mid ah loogu soo dhoweeyay cisbitaalka?
1. Amniga Dabaqa PVC wuxuu ka sameysan yahay alaabada ceyriinka ee PVC ee loogu talagalay dhalooyinka caanaha iyo xirmooyinka faleebada caafimaadka, oo aan lahayn walxo sun ah, "0" formaldehyde. Isla mar ahaantaana, haddii ay tahay geedi socod xumbo ama habab kale oo ka mid ah sagxadda PVC, dabacsanaanteeda ayaa aad u wanaagsan, taas oo ...
Nidaamka rakibaadda ee dabaqa vinyl isku mid ah
Dabaqa PVC wuxuu aad ugu badan yahay qurxinta xafiiska casriga ah, iyadoo laga faa'iideysanayo biyaha, dabka, carrab la'aanta, iwm. Talaabooyinka la dhigayo dabaqa PVC inta lagu jiro qurxinta waa sida soo socota: 1. Ku shub dabaq isku-dheellitiran isku-darka isku-darka dabaqa dhismaha, wuu qulqulaya dhulkuna iskiis u simo. Haddii des ...
Talooyinka dayactirka dabaqa vinylka ee isku midka ah Giqiu
Dabaqa vinyl-ka ee isku midka ah ee Giqiu ayaa la daaweeyay iyada oo aan wax laga sii darin Ka dib marka dhismaha iyo nadiifinta la dhammeeyo, waxaa loo isticmaali karaa si toos ah. Marka lagu daro dayactirka lagama maarmaanka ah inta lagu jiro isticmaalka, dabaqa loo yaqaan 'Permable Performable' waa in sidoo kale loo adeegsadaa faahfaahin yar oo ku saabsan shaqada iyo nolol maalmeedka. Tixgelin ...